4 lakile hahombiazanao amin'ny paikadinao amin'ny horonantsary sosialy | Martech Zone
4 lakile hahombiazanao amin'ny paikadinao amin'ny vidéo
Alakamisy 20, 2014 Douglas Karr
Izahay dia nizara infographic lehibe momba ny torolàlana ho an'ny horonan-tsary, izao misy tsara infographic avy amin'ny The Media Octopus amin'ny torohevitra momba ny fampiasana video sosialy ho an'ny marikao.
Tsy mbola nisy fotoana tsara kokoa hanaovana marika hampiasana vola amin'ny famoronana sy fizarana atiny izay mahatonga ny olona hihomehy mafy, hiketrika amin'ny fiandrasana na hahatsapa ny volon-damosin'ny vozony. Olly Smith, talen'ny varotra ho an'ny EMEA, Media tsy voafehy
Ireto misy tondro 4 tsara hamoronana ny paikadin'ny horonantsary an-tserasera:
Fantaro ny mpihaino anao - ny lahatsarinao dia tokony hahaliana, mampiala voly ary mampahalala vaovao hahasarika ny sain'ny olona. Profileo ny mpihaino anao hanomezana toky fa manome atiny tadiaviny ianao.
Mamorona ny atiny - ahoana no hisarika ny sain'izy ireo? Ataovy mampihetsi-po, miabo, mampientam-po ary mampiseho ny marikao izy ireo.
Tantano ny fizarana - tsy dia ilaina loatra ny horonantsary iray raha tsy misy mijery izany. Zarao ara-tsosialy ary ataovy izay hahazoana antoka fa mahatratra ny mpihaino ilainao ianao. Manatsara ny horonan-tsarinao amin'ny fikarohana koa!
Mandrefy ary manomeza fahombiazana - ahoana no handrefesanao ny fahombiazan'ny horonantsaryo? Manantena aho fa manana antso ho amin'ny hetsika ianao amin'ny farany izay manondro pejy fandraisana izay ahafahanao mandrefy ny fiovam-po.
Tags: Lahatsary Marketinglahatsary an-tseraserahoronantsary sosialyhoronantsary sosialy ho an'ny orinasany horita haino aman-jeryvideo marketing strategy
Fotoana izao hampijanonana ny fizarana famoahana gazety ho an'ny SEO